>Aung Tha Nge's poem – 22
>Mar Mar Aye - 339
1. နိုင်ငံတကာ မြန်မာ့သတင်း (ဘီအဲန်အိုင်) ၀က်ဘ်ဆိုဒ်
2. Burma Today
3. ပြည်တွင်းအိုးအိမ်မဲ့ ကရင်ဒုက္ခသည် ကော်မတီ (စာစောင်)
4. ဒေါက်တာ လွမ်းဆွေ ဘလော့ဂ်
5. ဒီဗီဘီ ရေဒီယို
6. ဒီဗီဘီ တီဗီ
7. ဒီဗီဘီ ၀က်ဘ်ဆိုဒ် (မြန်မာဘာသာ)
8. ဒီဗီဘီ ၀က်ဘ်ဆိုဒ် (အင်္ဂလိပ် ဘာသာ)
9. ဟစ်တိုင် (၀က်ဘ်ဆိုဒ်)
10. လွတ်လပ်သော မွန်သတင်းအေဂျင်စီ (အင်္ဂလိပ် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်)
11. လွတ်လပ်သော မွန်သတင်းအေဂျင်စီ (စီဒီ သတင်း)
12. လွတ်လပ်သော မွန်သတင်းအေဂျင်စီ (မွန် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်)
13. လွတ်လပ်သော မွန်သတင်းအေဂျင်စီ (မွန်ဘာသာ- ဒီဗီဘီ/အာရ်အက်ဖ်အေ)
14. လွတ်လပ်သော မွန်သတင်းအေဂျင်စီ (မြန်မာ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်)
15. ဧရာဝတီ (ရုပ်သံ)
16. ဧရာဝတီ (မြန်မာ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်)
17. ဧရာဝတီ (အင်္ဂလိပ် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်)
18. ဧရာဝတီ (စာစောင်)
19. ကချင်သတင်းဌာန (မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုဒ်)
20. ကချင်သတင်းဌာန (အင်္ဂလိပ် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်)
21. ကချင်သတင်းဌာန (ကချင် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်)
22. ကချင် သတင်းဌာန (အာရ်အက်ဖ်အေ- ကချင်ဘာသာ)
23. ကုလားတန် သတင်းဌာန (၀က်ဘ်ဆိုဒ်)
24. ကန္တာရ၀တီ တိုင်းမ် သတင်းစာ
25. ကန္တာရ၀တီ တိုင်းမ် မြန်မာ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်
26. ကန္တာရ၀တီ တိုင်းမ် (အာရ်အက်ဖ်အေ- ကရင်နီ)
27. ကောဝ်ဝေါ် သတင်းဌာန (ယမုံနာ ရေဒီယို)
28. ကောဝ်ဝေါ် သတင်းဌာန (အင်္ဂလိပ် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်)
29. ကောဝ်ဝေါ် သတင်းဌာန (မြန်မာ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်)
30. ကေအိုင်စီ (မြန်မာ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်)
31. ကေအိုင်စီ (စာစောင်)
32. ကေအက်စ်အဲန်ဂျီ (ရေဒီယို)
33. ခေါနုသုမ် (ချင်း ၀က်ဘ်ဆိုဒ်)
34. ခေါနုသုမ် (မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုဒ်)
35. ခေါနုသုမ် (အင်္ဂလိပ် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်)
36. ခေါနုသုမ် (အာရ်အက်ဖ်အေ- ချင်း)
37. ဂွဲကလူ (စာစောင်- ကရင်)
38. ဂွဲကလူ (၀က်ဘ်ဆိုဒ်- ကရင်)
39. မဇ္ဖျိမ (စီဒီ သတင်း)
40. မဇ္ဖျိမ (သတင်းစာ)
41. မဇ္ဖျိမ (တီဗီ)
42. မဇ္ဖျိမ (မြန်မာ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်)
43. မဇ္ဖျိမ (အင်္ဂလိပ် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်)
44. မိုးမခ ရေဒီယို
45. မိုးမခ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်
46. မိုးကြိုး။ လွတ်လပ်သော မြန်မာ သတင်းအေဂျင်စီ (၀က်ဘ်ဆိုဒ်)
47. နေရဉ္ဇရာ (မြန်မာ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်)
48. နေရဉ္ဇရာ (အင်္ဂလိပ် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်)
49. နေရဉ္ဇရာ (အာရ်အက်ဖ်အေ- ရခိုင်)
50. အဲန်အမ်ဂျီ (သတင်းနှင့် မီဒီယာ ကွန်ယက်- အာရ်အက်ဖ်အေေ၇ဒီယို အစီအစဉ်များ)
51. အဲန်အမ်ဂျီ (၀က်ဘ်ဆိုဒ်)
52. နေ့သစ် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်
53. ရှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းစဉ် (မြန်မာ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်)
54. ရှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းစဉ် (အင်္ဂလိပ် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်)
55. ရှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းစဉ် (စီဒီ သတင်း)
56. ရှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းစဉ် (Independent News letter)
57. ရှမ်းသံတော်ဆင့် ရေဒီယို (ဒီဗီဘီ- အာရ်အက်ဖ်အေ- ရှမ်း)
58. Shan Youth Power Media (စာစောင်)
59. Shan Youth Power Media (အင်္ဂလိပ် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်)
60. Shan Youth Power Media (ရှမ်း ၀က်ဘ်ဆိုဒ်)
61. ရောင်ခြည်ဦး (၀က်ဘ်ဆိုဒ်)
62. ရောင်ခြည်ဦး (စာစောင်)
63. ရိုးမ- ၃ (၀က်ဘ်ဆိုဒ်)